Thiamine (သိုင်ရာမင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Thiamine (သိုင်ရာမင်း)
Thiamine (သိုင်ရာမင်း) ကဘာလဲ။
Generic Name: Thiamine (သိုင်ရာမင်း) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Thiamine (သိုင်ရာမင်း) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Thiamine အား thiamineဓါတ် (ဗီတာမင် B1)ချို့တဲ့ခြင်းကို ကုသရန် သို့မဟုတ် ကာကွယ်ရန် အသုံးပြုပါသည်။ဤဗီတာမင်သည် ကဆီဓါတ်(ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်)ကို ချေဖျက်သိုလှောင်ရန်၊ ခန္တာကိုယ် ပုံမှန်ကြီးထွားမှုကို ထိန်းသိမ်းရန် နှင့် အာရုံကြောများ အားကောင်းရန်အတွက် အရေးပါသည်။
Thiamine (သိုင်ရာမင်း) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Thiamine (သိုင်ရာမင်း) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Thiamine (သိုင်ရာမင်း) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
• အကယ်၍ သင့်တွင်ကိုယ်ဝန်ရှိသည် သို့မဟုတ် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန် အစီအစဉ်ရှိသည် သို့မဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေလျှင်
• အကယ်၍ သင်သည် အခြားဆေးဝါးများကို သောက်သုံးနေလျှင် (ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်ဆေးဖြစ်စေ၊မိမိဖာသာသောက်သည့်ဆေးဖြစ်စေ၊သဘာဝဆေးဖက်ဝင်ပစ္စည်းများ၊အခြားဖြည့်စွက်စာများ)
• အကယ်၍သင်သည် ဆေး၊အစားအသောက် သို့မဟုတ် အရာတခုခုနှင့် ဓါတ်မတည့်သည့် ရာဇဝင်ရှိလျှင်
• အကယ်၍ သင့်တွင် ကျောက်ကပ် ပြဿနာရှိလျှင်
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Thiamine (သိုင်ရာမင်း) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ယခုဆေးဝါးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင် အသုံးပြုလျှင် ဆိုးကျိုးများရှိမရှိကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် လုံလောက်သော လေ့လာစမ်းသပ်ချက်များမရှိပါ။ ဆေးမသောက်သုံးမီတွင် ဖြစ်နိုင်ချေကောင်းကျိုးများနှင့် ဆိုးကျိုးများအားလုံးကို ချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက် သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။ ယခုဆေးဝါးသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက်အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် A ရှိသည်ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။
(ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်များတွင် စိတ်ချရမှုရှိမရှိကို မသိရသေးသည့် ဆေးဝါးများနှင့်ပတ်သက်၍ ကောင်းကျိုးနှင့် ဆိုးကျိုးများကို ချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက် သင်၏ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများအမြဲလုပ်ပါ။)
Thiamine (သိုင်ရာမင်း) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ပင်းထန်သော ဓါတ်မတည့်သည့်လက္ခဏာများ —-> အနီစက်များထွက်လာခြင်း၊ယားယံခြင်း၊ရောင်ရမ်းခြင်း(အထူးသဖြင့် မျက်နှာ၊လျှာ၊လည်ချောင်း)၊အလွန်ထိုင်းမှိုင်းမူးဝေခြင်း၊အသက်ရှုရခက်ခြင်း)
ဘယ်ဆေးတွေက Thiamine (သိုင်ရာမင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Thiamine (သိုင်ရာမင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Thiamine (သိုင်ရာမင်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Thiamine (သိုင်ရာမင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေမှာ Thiamine ကို သောက်သုံးရမယ့်အချိုးအစားက ဘယ်လောက်လဲ။
ကလေးတွေအတွက် Thiamine (သိုင်ရာမင်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
• ဝ-၆လ = ဝ.၂မီလီဂရမ်
• ၆-၁၂လ = ဝ.၃မီလီဂရမ်
• ၁-၃နှစ် = ဝ.၅မီလီဂရမ်
• ၃-၈နှစ် =ဝ.၆ မီလီဂရမ်
• ၈-၁၃နှစ် = ဝ.၉ မီလီဂရမ်
• ၁၃-၁၈နှစ် = ၁.၂မီလီဂရမ်(အမျိုးသား)။ ၁မီလီဂရမ် (အမျိုးသမီး)
Thiamine (သိုင်ရာမင်း) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Thiamine http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono- 965-thiamine%20vitamin%20b1.aspx activeingredientid=965&activeingredientname=thiamine%20vitamin%20b1. Accessed July 15, 2016.
Thiamine https://www.drugs.com/cdi/thiamine.html. Accessed July 15, 2016.GJJHJGHKGDWWR
Thiamine http://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/thiamine/background/hrb-20060129. Accessed July 15, 2016.